कोरोना भाइरस (Covid19) भ्याक्सिन फेला पर्‍यो। कसले पाए?
अन्तर्राष्ट्रिय कोरोना भाइरस (Covid19) भ्याक्सिन फेला पर्‍यो। कसले पाए?
अब रूस एक COVID19 खोप विकास गर्ने पहिलो देश बन्यो। मस्कोले भने कि यो सफलतापूर्वक मानव मा परीक्षण पूरा भएको छ। यद्यपि खोप कहिले छोडिनेछ भन्ने बारेमा थप विवरण छैन।
विश्वभरका देशहरूले कोविड 19 खोप विकास गर्ने दौड जित्ने प्रयासमा आफ्ना सबै प्रयासहरू ओगट्छन्। रूसले भ्याक्सिनको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्दै क्लिनिकल परीक्षण पूर्ण गरिसकेको छ। औषधी Sechenov विश्वविद्यालयको क्लिनिकल अनुसन्धानको लागि केन्द्रको प्रमुख उद्धृत गर्दै।
रुसको समाचार एजेन्सी पासले आइतवार रिपोर्ट गरेको अनुसन्धान भइसकेको छ र तिनीहरूले यो खोप सुरक्षित छ भने स्वयंसेवकहरू सुरक्षित छन्। परीक्षणमा भाग लिनेहरू जुलाई १ 15 र २० तारिख डिस्चार्ज हुनेछन् र मेडिकल सुपरिवेक्षणमा रहनेछन्। घर पठाइएपछि।
जहाँसम्म यो खोप देशको Gamaleya राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र महामारी विज्ञान र सूक्ष्म जीवविज्ञान को लागी विकसित गरीएको पछि जबकि कुनै पनि अन्य जानकारी थिएन।
व्यावसायिक उत्पादन प्रवेश हुनेछ। यसैबीच, जर्मन वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि COVID एन्टिबडीहरू केहि महिना भन्दा लामो नहुन सक्छ। लम्बे समयको प्रतिरक्षा प्रतिजीवी को लागी आशाहरु।
म्युनिकमा मेडिकल क्लिनिकले गरेको अध्ययनले देखायो कि नौ बिरामीहरूमध्ये चारमा। प्रतिजीवी एन्टिबडीहरूको मात्रामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।
यसले पुनःप्राप्त बिरामीहरूले फेरि भाइरस संकुचन गर्न सुझाव दिन्छ। यस पृष्ठभूमिमा अमेरिकाका विज्ञहरू भन्छन् एन्टीबॉडी युक्त रक्त प्लाज्मा ईन्जेक्शनले Covid19को खोपको लागि अर्को राम्रो चीज हुनसक्दछ।
एलए टाईम्सका अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिकहरूको विचारमा यो अहिलेको सबैभन्दा सम्भव उपचार हुन सक्छ।
यस विधिले हेपाटाइटिस ए जस्ता अन्य संक्रामक रोगहरूको रोकथाम गर्न सफल भएको हुँदा उक्त कागजातले स federal्घीय सरकारको स्तरमा सहयोगको कमी रहेको बतायो।
धेरैले सोच्दछन् कि प्लाज्मामा आधारित उपचारहरूले स्वस्थ मानिसहरूमा संक्रमण रोक्नको लागि बिरामी परेका बिरामीहरूको उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।